नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखमा शैलेन्द्र खनाललाई नियुक्त, दुबै खनाललाई हार्दिक बधाई !
नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखमा शैलेन्द्र खनाललाई नियुक्त, दुबै खनाललाई हार्दिक बधाई !
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखमा शैलेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले डीआईजी खनाललाई आईजीपीमा बढुवा गरेको हो । आईजीपीका लागि सर्वेन्द्र खनालसँगै रमेश खरेल र पुष्कर कार्की दौडमा थिए । डीआईजी बढुवाको बरियतामा खनाल पहिलो, खरेल दोस्रो र कार्की तेस्रो नम्बरमा थिए । सशस्त्रको आईजीपीका लागि खनालसँगै पुष्पराम केसी दौडमा
थिए । बैठक अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादलसँग आईजीपी नियुक्तिबारे परामर्श गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बुधबारदेखि अवकाश पाउँदैछन् । दुबै प्रमुखलाई नेपाल मदरको तर्फबाट हार्दिक बधाई ।